नक्कली हस्ताक्षर गरेर जनता बैंकबाट पैसा निकाल्ने ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली हस्ताक्षर गरेर जनता बैंक खाताबाट रकम झिक्ने ६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बैंकका ग्राहकहरुको नक्कली हस्ताक्षर गरेर बैंकबाट रकम झिक्ने समूहका ६ जनालाई नगद १८ लाख ५० हजार रुपैयाँसह...
बझाङको जेउडेगाडको एक मेघावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडियो
बझाङ । जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका ८ नम्बर वडा खाराबगरमा जेउडेगाडबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्य सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिएको छ । नीजिस्तरबाट निर्माण गरिएको उक्त आयोजना राष्ट्रिय प...
देउवाले सुर्यलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयास गर्नु भयो: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति विरुद्ध खनिएका छन । कास्की क्षेत्र नम्बर २ पोखरामा आयोजित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमलाई सम्बो...
ओली भेट्न देउवा पुगे अस्पताल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका छन । सभापति देउवा बुधबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर प्रधानमन...
पोखराको नेकपा सभा परिसर नजिकै बम विस्फोट
पोखरा । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सम्बोधन गर्ने चुनावी सभा परिसरमा बम विस्फोट भएको छ । नेकपाले आज पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र नयाँबजारमा बृहत चुनावसभा गर्दैछ । विभिन्न स्थलबा...
एजेन्सी । लामो रस्साकस्सीपछी महाराष्ट्रको राजनीतिले निकास पाउने संकेत देखापरेको छ । निर्वाचन पूर्व विजेपी-शिवसेना गठबन्धनले एनसीपी-कांग्रेस गठबन्धनलाई अनेक आरोप लगाउँदै महाराष्ट्रमा स्थिर सरकार निर्मा...
विभिन्न मुद्धामा फरार ४७ जना प्रतिवादीहरु पक्राउ
मोरङ । विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीहरु ४६ जनालाई सोमबार र १ जनालाई मंगलबार गरी ४७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । ती मध्ये चोरी, लागूऔषध, अंशचलन, सार्वजनीक अपराध, जुवा तथा लु...
उप-निर्वाचन नजिक आउँदै छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र अरू प्रतिपक्षले नेकपा र सरकारलाई लगाएका विभिन्न आलोचना, भ्रम र आरोपहरू बारे आदरणीय मतदाताहरूमा केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। प्रधानमन्त्री क...
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन । पूर्वराजा शाहले आफ्ना सहयोगीमार्फत स्वास्थ्यलाभको सन्देश पठाएका हुन् । पूर्वराजाका प्रमुख सचिव प...
प्रधानमन्त्रीले कुरा गरे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । मंगलबार विहान ९ बजे अस्वस्थ भई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिवि श...
बरिष्ठ पत्रकार तथा बाल साहित्यकार विनय कसजु प्रति श्रद्धाञ्जली !!!
लेखन त्यति सजिलो काम होइन तर पनि मानिसहरू लेखिरहन्छन । लेखनले मानिसको जीवनलाई उर्जाशिल र कर्मयोगी बनाउन मद्दत गर्दछ । त्यस्तै लेखनको माध्यमबाट हजारौं हजार मानिसलाई देशको समृद्धि र विकासको पक्षमा उभ्य...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार देखिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था आज(बुधबार) मंगलबारको भन्दा सुधार हुँदै गएको हो । बुधबार बिहान उनलाई भेन्टिलेटरबाट पनि हटाइएको छ ।...
कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा आगलागी
काठमाडौं । कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा आज(बुधबार) आगलागी भएको छ । तरकारी बजारका सुरक्षा गार्ड बस्ने कोठामा ग्याँस लिक भएर आगलागी भएको बताइएको छ । आगो निभाउने प्रयास जारी छ । आगलागीको विस्तृत वि...
सुब्बा साप, कहाँबाट आयो १९ करोड ?
अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अर्का नायबसुब्बा थपिएका छन्– मदनप्रसाद गुप्ता । अख्तियारले मालपोत कार्यालय सिमराका तत्कालीन नासु गुप्ताविरुद्ध १५ करोड अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाएको छ। उनी मालपोत कार्यालय ...
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे छलफल गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतले जवाफ नदिँदा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक तय हुन सकेको छैन। नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति नेपाल सरकारले...
सिरहा । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका- ५ लालपुरबाट लागूऔषधसहित प्रहरीले दुई युवकलाई पक्राउ गरेकाे छ । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका- ५ का २१ वर्षीय मुकेश कुमार र सोही ठाँउका २५ वर्षीय सन्जय कुमार यादव पक्...
धानमा धमाधम आगो लगाउँदै किसान
पाक्न लागेको धानमा फड्के कीरा लागेपछि यतिबेला झापाका किसान खेतमा धमाधम आगो लगाइरहेका छन् । कीराको संक्रमणले धानबाली सखाप भएपछि खेतमै खागो लगाउन किसान बाध्य भएका हुन् । फड्के कीराको संक्रमणका कारण धान...
मेडिकल कलेज शुल्क विवादः अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति
मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिनभरको रस्साकस्सीबिच मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क...
राजस्व अनुसन्धान विभागले ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको अनुसन्धान टुंग्याएको छ। गत वर्ष सुरु गरिएको नक्कली भ्याट बिल (मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक) को अनुसन्धानमा विभागले ६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बिगो दाबीसहित...